မျက်မှောက်ခေတ်အတွက် ပိုမိုအရေးပါလာသော SWOT Analysis
SWOT Analysis ကို TOWS လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။
ဗျူဟာမြောက်အစီအစဉ်တွေချမှတ်နိုင်ဖို့နဲ့ Business Review ရေးသားနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခု စီးပွားရေးတစ်ခု စတင်မလုပ်ဆောင်မီမှာ မိမိလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ --
- အားသာချက် (Strength)
- အားနည်းချက် (Weakness)
- အခွင့်အလမ်း (Opportunity)
- ခြိမ်းခြောက်မှု (Threats) စတာတွေကိုစစ်တမ်းကောက်လေ့လာဖော်ပြထားလို့ SWOT Analysis လို့ခေါ်ပါတယ်။
SWOT Analysis ဆိုတာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပဲ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု Effortကိုရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဆရာတစ်ယောက်ပြောဖူးတာက SWOT Analysis လုပ်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေဆီကနေ Review တောင်းကြည့်ရင် Weakness များတတ်ပြီး Strength နည်းနည်းပဲ ပါတတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိမိတို့ထုတ်ကုန်ရဲ့ Strength ကိုလည်း အချက်ကျကျရှာဖွေတတ်ပါမှ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေးမှာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းမှာဖြစ်လို့ မိမိတို့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ Weakness တွေအပြင် Strength ကိုလည်း ရှာဖွေတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
SWOT Analysis ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့သူကတော့ အဲလ်ဘတ်ဟန်ဖရေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၀ နဲ့ ၁၉၇၀ ကြားမှာ စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတွေကို သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကနေ စတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြုလုပ်ခဲ့ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာ သူ့ရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာလျှောက်လှမ်းလျက်သားနဲ့ ဘာကြောင့်ကျရှုံးရတာလဲဆိုတာကို ဖော်ထုတ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အထက်ပါသုတေသနပြုလုပ်ခြင်းရဲ့အဖြေအရ လုပ်ငန်းရဲ့ အဓိကသော့ချက်နေရာတွေ/ အသုံးပြုမယ့်ပစ္စည်းနဲ့ လမ်းစဉ်တွေကို စူးစမ်းရှာဖွေဖော်ထုတ်တင်ပြထားလို့ SOFT Analysis လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟန်ဖရေးနဲ့သူ့ရဲ့သုတေသနအဖွဲ့သားတွေဟာ
- လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေထဲမှာ ဘာက ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာကို ကောင်းအောင် တည်ဆောက်ပေးသလဲဆိုတဲ့ Satisfactory
- အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိုပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးယူရမလဲဆိုတဲ့ Opportunity
- လက်ရှိအချိန် မိမိရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာ ဘာတွေက မိမိတို့ကို ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်နေစေရတာလဲဆိုတဲ့ Fault
- အနာဂတ်မှာ မိမိတို့လုပ်ငန်းအတွက် ဘာတွေကများ အတားအဆီးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရတာလဲဆိုတဲ့ Threats စတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုချပြပေးနိုင်ခဲ့လို့ SOFT Analysis လို့ခေါ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်ကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာတော့ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာတော့ Fault ကို Weakness ဆိုပြီးပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ကြောင့် SOWT Analysis ဆိုပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာတော့ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စာအုပ် စတင်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။
အားသာချက် အားနည်းချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မျက်မှောက်ခေတ်မှာ တော်တော်လေး အရေးပါလာတာ တွေ့ရပါတယ်။
မိမိထုတ်ကုန်ရဲ့အားနည်းချက် အားသာချက်/မိမိအဖွဲ့အစည်းရဲ့အားသာချက် အားနည်းချက်စတာတွေကို ကောင်းစွာသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိအားသာချက်ကိုသိမှ ဘယ်လိုနေရာမှာ အသုံးချရမလဲ သိလာမယ်။
မိမိအားနည်းချက်ကိုသိမှ ဘယ်လိုပြင်ဆင်အားထုတ်ရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ မိမိဟာအရောင်းဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့။ မိမိထုတ်ကုန်ရဲ့အားသာချက်ကိုသိပါမှ Customer ကိုဆွဲဆောင်တဲ့အခါမှာ ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ရှင်းပြနိုင်မယ်။ မိမိကုန်ပစ္စည်းရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိပါမှ Customer ကထောက်ပြပြောဆိုလာတာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားထုတ်ကုန်တူပြိုင်ဖက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကို စဉ်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးချေပ တုံ့ပြန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ
မဟုတ်ရင်တော့ မိမိထုတ်ကုန်ရဲ့အနာဂတ်ဟာ ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခုဆိုရင် တစ်ချို့အင်တာဗျူးတွေမှာ သင့်ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲ။ သင့်ရဲ့အားနည်းချက်က ဘာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုတောင် တွေ့လာနေရဟန်ရှိပါတယ်။
SWOT Analysis နဲ့ပတ်သက်ပြီး Internal Issue နှစ်ခုကိုအရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် မိမိ Product ရဲ့အားသာ
ချက် Strength နဲ့အားနည်းချက် Weakness တွေကို အရင်စစ်တမ်းကောက်ယူရမှာပါ။ ဥပမာ မိမိရဲ့ထုတ်ကုန်
ဟာ ခေါင်းလျှော်ရည်တစ်ခုဆိုပါစို့။ မိမိ product ဟာ အရည်အသွေးလည်းကောင်းတယ်။ အရေအတွက်အနေ နဲ့လည်း ဈေးကွက်တောင်းဆိုမှုကို အချိန်မီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်။ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံကလည်း အပြစ်ပြောစရာ နည်းလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးကွက်မှာ ဘာဖြစ်လို့ရောင်းအား မကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ အားနည်းချက်ကိုရှာရတော့မယ်။ အဲဒီအခါ ဈေးကွက်ကို စူးစမ်းလေ့လာရတော့မယ်။ လေ့လာတဲ့အခါမှာ ထုတ်ကုန်တူပြိုင်ဖက်တွေက ခေါင်းလျှော်ရည်ပမာဏ တစ်ခုလောက် ဒါမှမဟုတ် လက်ကိုင်ပုဝါလိုမျိုးပစ္စည်းလေးတွေ အပိုထည့်ပေးထားကြတယ်။ မိမိမှာ ဒီအချက်မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် မိမိထုတ်ကုန်ကိုလည်း အရောင်းသွက်လက်ရေး လုပ်ရတော့မယ်။ မိမိအနေနဲ့ အပိုလက်ဆောင်လည်းထည့်ပေးမယ်။ ဈေးနှုန်းလည်း အနည်းငယ်လောက်လျော့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အချက်မျိုး တွေးရပါမယ်။ မိမိရဲ့အစီအစဉ်ဟာ တစ်ခြားသူတွေထက် အနည်းငယ်လောက်လေး ထူးခြားနေပါမှ ဈေးကွက်မှာလူသိများအောင် ထိုးဖောက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့နယ်ဝေးဒေသတွေ
မှာ မိမိကအပိုအနေနဲ့ထည့်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ကို ဈေးနှုန်းတစ်ခုနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချနေတာမျိုးတွေလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ မိမိရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်း ထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့ Threats ပါပဲ။ ဒါတွေကိုလည်း သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှုထောင့်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင် SWOT Analysis ဆိုတာက လုပ်ငန်းအတွင်း ပတ်သတ်ဆက်နွယ် နေတဲ့ကိစ္စရပ်များ ( Internal Issues ) ဖက်အပိုင်းမှာ အားသာချက် ( S-Strength ) ၊ အားနည်းချက် ( W-Weaknesses ) စသည့်အချက် ၂ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းပြင်ပကိစ္စရပ်များ( External Issues ) အတွက်ဆိုလျှင်တော့ အခွင့်အလမ်းများ ( O-Opportunities ) နှင့် ချိန်းခြောက်မှု ( T-Threats ) တို့ကို အသုံးချ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Analysisလုပ်ဆောင် ရာတွင် မိမိ Organization ၏ Business Objective ကိုကြည့်ပြီး မိမိလုပ်ငန်းအတွင်းတွင်ရှိတဲ့ အားသာချက် ၊ အားနည်းချက်များကို လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Product ၊ Price ၊ Promotion ၊ Place ၊ Personnel, finance, manufacturing စသည့်အချက်များ ၊ လုပ်ငန်းနေရာများအတွက်ဆိုလျှင်တော့ မဖြစ်မနေလုပ် ဆောင်သင့်ပါတယ်။
ပြင်ပမှ သက်ရောက်မှုများအပိုင်းမှာ နိုင်ငံစီးပွားရေး ၊ နည်းပညာအပြောင်းအလဲများ ၊ ဥပဒေအပြောင်းအလဲများ ၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရေးပုံစံများကိုလည်းထည့်သွင်း စဉ်းစားရေးသားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
SWOT Analysis က ဘယ်လိုအသုံးဝင်ပါသလဲ? နေရာတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်တယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ချမှတ်ရာမှာလည်းကောင်း ၊ မိမိလုပ်ငန်းအား ကျဆင်း မသွားရေး အကာအကွယ်ပေးသော Tools တခုအဖြစ်လည်းကောင်း ၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု နည်းနည်းဖြင့် အမြတ်အစွန်းများများပြန်လည်ရရှိနိုင်ရေး Business Plan များရေးဆွဲရာမှာလည်းကောင်း ၊ရေရှည်မှာ အောင်မြင်မှုများ ရရှိစေနိုင်သောပုံစံကောင်းများအား ကြိုတင်ရေးဆွဲစီမံနိုင် ရေးအတွက် လည်းကောင်း အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် Business Planning ကို SWOT Analysis ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပုံကို ဥပမာနှင့်တကွ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။Construction ပိုင်းအတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော လူတိုင်းက ပါဝင်ဆွေးနွေးရ မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင် SWOT Analysis လုပ်ဆောင်ရ ခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းဟာ ဘာလဲဆိုတာကို လူတိုင်းသိ ဖို့လိုပါတယ်။ Business Plan ရေးဆွဲရန် ၊လုပ်ငန်းများ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြီးစီးနိုင်ရန်/ ဆောက်လုပ်ပြီးအခန်းတွေ ကိုရောင်းချတယ်ဆိုရင်လည်းအရောင်းတတ်စေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ရန် ၊အခြားပြိုင်ဖက်တွေထက် ဈေးကွက်ကို ပိုမိုထိုးဖောက်ရန် စသဖြင့်ပေ့ါ။ အခြေခံအချက်အနေနဲ့က တော့ နိဒါန်းတုန်းကပြောခဲ့သလို Team တခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတတ်အောင်လုပ်ဆောင်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါ
ပထမဆုံးအနေဖြင့် သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းတွင်း အားသာချက်များကို စာရင်းပြုစုရေးသားပါ။ ဘာတွေဖြစ် မလဲ။ ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေပိုင်းမှာ ငွေအ၀င်များမှန်ကန်မှုရှိခြင်း ၊ မိမိ Image အား ကောင်းစွာတည်ဆောက်ထားရှိနိုင်ခြင်း ၊ အသုံးစရိတ်များအား ထိရောက်မှုရှိရှိ အသုံးချနိုင်ခြင်း ၊ ကောင်းမွန်ထိရောက်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းဝယ်ယူရေး နှင့်အခန်းရောင်းချရေးလမ်းကြောင်းများ ရှိခြင်း၊၀န်ဆောင်မှုကောင်းမွန်ခြင်းစသဖြင့် လုပ်ငန်းအတွင်းရှိ အားသာချက်ရှိသည်များ ကို ရေးသားဖော်ပြရပါမယ်။
ဒုတိယအနေဖြင့် သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းတွင်း အားနည်းချက်များကို စာရင်းပြုစုရေးသားပါ။ ဘာတွေဖြစ် မလဲ? စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ရာတွင် Information အပြည့်အ၀မရရှိသည်များ ၊ Marketing ပိုင်းဆိုင်ရာ ညံ့ဖျင်းမှုများ ၊ အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ထိရောက်မှု မရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်များ အားလုပ်ဆောင်နေရခြင်း စသဖြင့် လုပ်ငန်းအတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းကျဆင်းနေရသည့်အချက်များကို ထည့်သွင်းရေးသားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တတိယအချက်အနေဖြင့် အခွင့်အလမ်းများကို ရေးသား ဖော်ပြရပါမယ်။ နည်းပညာအသစ်များဖြင့် မိမိတို့၏ ရှိရင်းစွဲ လမ်းစဉ်များတွင်ထည့်သွင်းလည်ပတ်ခြင်းဖြင့် ကုန်ကျ စရိတ်သက်သာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း (ဥပမာ မဆလာဂျိုးခွာစက် /ကြမ်းခင်းအချောညှိဖို့အတွက် ပေါလစ်တင်စက်/ မဆလာဖျော်စက်များ ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း) ၊ နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများ ၊ ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း များစသည့် ပြင်ပမှ ရရှိနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း ရေးသားဖော်ပြရပါမယ်။
နောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့် ပြင်ပမှ ချိန်းခြောက်ခြင်းများ ကိုရေးသားဖော်ပြရမည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အဆောက်အဦးများကိုသာဝယ်ယူအားပေးမှုများမြင့်တတ်လာခြင်း ၊လုပ်ငန်းတူသောကုမ္ပဏီများ များပြားလာခြင်း/အဖွဲ့အစည်းထဲမှာလုပ်ခလစာပေးချေရမှုမြင့်တက်လာခြင်း
စတဲ့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သုံးသပ်တွေ့ရှိတဲ့အချက်တွေအားလုံး ကိုထည့်ရေးရပါမယ်။
နိဂုံးချုပ်ပြောရရင် SWOT Analysis ပြုလုပ်ပြီး ရရှိလာတဲ့အချက်များကိုအခြေခံပြီး မဟာဗျူဟာမြောက် Business plan ရေးဆွဲခြင်းကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ SWOT Analysis မှာပါတဲ့အချက်(၄)ချက်ကိုအခြေခံပြီး အစီအမံကောင်းတွေချမှတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကို အခြားသူတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ ပိုမိုထိရောက်ကောင်းမွန်စေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက် Business plan အကောင်အထည်ဖော်မှုကို ထပ်မံပြီး စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းတွေလုပ်ဆောင်ပြီးမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကို ပိုမိုတိုးတက်အောင် မြှင့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ SWOT Analysis ဆိုတာ အတွင်းစည်းနဲ့အပြင်စည်း ဒါမှမဟုတ် ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာဂတ်ကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ထားတဲ့အစီအမံ တစ်ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဘယ်နေရာ ဘယ်လုပ်ငန်းမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။